प्रधानमन्त्री भन्छन् पहिलो गाँसमै झिँगा! समानुपातिक संसद भन्छन्; “हामीलाई आफ्नाे पैसा पाए त भैगाे नि?” – bampijhyala.com
Home > समाचार > राजनिती > प्रधानमन्त्री भन्छन् पहिलो गाँसमै झिँगा! समानुपातिक संसद भन्छन्; “हामीलाई आफ्नाे पैसा पाए त भैगाे नि?”
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४ bampijhyala
२४ फाल्गुन, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो दिनको बैठकमा भएको बहिस्कार र नाराबाजीलाई पहिलो गासमै झिँगा भनी टिप्पणी गरिदिए।
आइतबारको संसद बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले बहिस्कार गरेको थियो । संसदकाे माग गर्दै सडक तताएका राजनितिक दल संसद खुले पछि काे याे हर्कतले पनि राजनितिकहरुकै लागि हास्यासपद बनेकाे छ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोष्टम घेराउ गरेर नाराबाजी गरेका थिए । आखिरि किन र केका लागि भन्ने प्रष्ट वर्तवान राजनितिकले साबित गरिदियकाे छ। संसदहरुले खाइपाइ आएका सुविधा केहि महिना खाेसिए पनि तिन महिनाकाे एक मुष्ट माेटाे रकम हातपारेका छन्।
हिजाे संसद सचिवालयमा उपस्थित केहि संसदहरुकाे खास-खुस निकै थियाे। समानुपातिक संसदहरुले यति संम्म भन्न भ्याए कि, हामीलाई आफ्नाे पैसा पाए त भैगाे नि? जाे प्रधानमन्त्री भए नि के नै भयाे र ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टर सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बुधबारदेखि बन्द हुने २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४
विद्यालय बन्द गर्ने-नगर्नेबारे आज छलफल हुँदैं २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४
कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्मको सडक निर्माण छिट्टै सकिने २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४
बालबालिकामा संक्रमण बढ्दै : दुई सातामा २७१ संक्रमित २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४
सदस्यताको विवरण बुझाउने म्याद पुन थप्दै कांग्रेस २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:०४